Akwụkwọ 3 kacha mma nke Santiago Posteguillo › June 2022
Eleghị anya onye edemede Spanish kacha nwee akụkọ akụkọ mere eme bụ Santiago Posteguillo. N'ime akwụkwọ ya anyị na -ahụ akụkọ akụkọ dị ọcha mana anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ atụmatụ gafere akụkọ ihe mere eme iji banye n'ime akụkọ echiche ma ọ bụ nka ma ọ bụ akwụkwọ.
Ihe ebumpụta ụwa sitere na ike ya itinye akwụkwọ siri ike nke na -adọtakwa ndị na -agụ akwụkwọ na -achọ nguzozi n'etiti ihe ọmụma na ntụrụndụ, nke a na -enweta n'ụzọ dị ukwuu site na asụsụ dị omimi. N'ihi ya, ọ bụrụla onye na -ere ahịa nke nwere ike ime ka ndị nkatọ purist na ndị na -agụ akwụkwọ nwee mmasị karịa na akwụkwọ akụkọ ntụrụndụ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ naanị omume ọma nke njikọta ga -ekwe omume na onye ode akwụkwọ maara ihe, yana nka nkwukọrịta yana nnukwu ihe okike.
M na -eme nne na nna iji gosi na enwere ike ịchọta otu n'ime ọrụ ya kacha ama mma, Africanus trilogy, ebe a:
Zụrụ ya Ebe a
Ọ na -emekwa na onye ọ bụla na -ede akwụkwọ na onye maara ihe nke ọma nke isiokwu na -emecha daba n'akwụkwọ edemede ma ọ bụ sagas. E ji nkwanye ugwu dị ukwuu nabata akụkọ ifo ya na mba Rome n'akụkụ niile nke edemede.
Na ihe a niile n'ime naanị afọ iri nke nrara nye akwụkwọ. Ogologo oge nke onye edemede a hụrụ n'anya akụkọ ifo dị iche iche, na -egosi nnukwu enigma ma ọ bụ na -akọ akụkọ akụkọ na -atọ ụtọ nke ukwuu. Dịka ọtụtụ ndị na -agụ ya ji sagas akụkọ ihe mere eme kpọrọ ihe karịa, nhọrọ m nke ọrụ ya kacha mma na -ewere ụzọ ndị ọzọ, akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nwere ihe ụtọ pụrụ iche, nke ihe dị iche iche nke onye edemede nwere ike ikpughere ihe ngosi ...
Akwụkwọ akụkọ kacha mma 3 kacha mma nke Santiago Posteguillo dere
Rome bu m
Alaeze Ukwu Rom enweghị ihe nzuzo maka Posteguillo. Ọ dịghị onye dị mma karịa ya ịgagharịgharị akụkọ ifo kachasị ukwuu iji mee ka ìhè dịkwuo elu. Na-akọwapụta eziokwu mana na-erutekwa ọkwa ọmịiko na nṅomi (rue mgbe Posteguillo agaghị ekwe omume), na nnukwu ndị nwoke na ndị nwanyị nke ụwa ochie ahụ nke bu anyị ụzọ. Ave Santiago na onye ọ bụla gaa n'ọgba aghara nke ịchọtaghachi eze ukwu kachasị ukwuu na akụkọ ntolite.
Rome, 77 BC A ga-ekpe onye omebe iwu obi tara mmiri Dolabela maka nrụrụ aka, ma ọ goro ndị ọka iwu kacha mma, ọ zụtala ndị juri na, na mgbakwunye, a maara ya maka iji ime ihe ike megide ndị niile na-eche ya ihu. Ọ dịghị onye na-anwa anwa ịbụ onye ọkàiwu, ruo mgbe mberede, megide ihe ọ bụla nsogbu, a na-eto eto patrician nke nanị afọ iri abụọ na atọ na-ekweta na-edu ikpe, na-agbachitere ndị Rome na-agbagha ike nke ndị ọkachamara. Aha onye ọka iwu amabeghị aha bụ Gaius Julius Caesar.
Ijikọ nke ọma ijikọ ike akụkọ ihe mere eme na-agwụ agwụ na ikike ịkọ akụkọ pụrụ iche, Santiago Posteguillo jisiri ike mee ka onye na-agụ ya mikpuo n'ọgụ nke agha ahụ, mee ka ọ na-aga n'okporo ụzọ kacha dị ize ndụ ka ndị omebe iwu nke ndị omebe iwu na-ezo n'akụkụ ọ bụla, na-ebi akụkọ ịhụnanya Julius. Siza na Cornelia, nwunye mbụ ya, na n'ikpeazụ ghọta otú mmalite nke mmadụ si bụrụ akụkọ ifo.
Julia gbaghaara chi
Na akụkọ ihe mere eme, Julia Domna biri ndụ ya dị ebube dị ka Eze Nwanyị Rome ruo afọ iri na asatọ. N'akwụkwọ edemede ọ bụ Santiago Posteguillo onye weghachiri ya ka ọ bụrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndị ahụ (ọ dịghị mgbe ọ ka mma iweta laurel dị ka akara Rome nke mmeri kacha mma), wee mee ka nwanyị bụrụ ihe ngosi site na mmalite nke ọdịbendị ọdịda anyanwụ anyị.
Site na mmalite, nke Onyinye mbara ala 2018 ọ ga -abụrịrị nkwanye ugwu dị mkpa maka Posteguillo ịbanye n'ime nnukwu onye na -akwado ya na saga nke ugbua nwere ebumnuche nke nnukwu akụkọ ihe mere eme maka ndị hụrụ ụwa ochie n'anya.
Ebube Julia, nke ejiri ọgụ nwanyị ahụ na -adịghị akwụsị akwụsị na njikwa alaeze niile, jiri amamihe na nkwenye siri ike bịarute na ọ bụ naanị site n'ime ka a hụ ya n'akụkụ dị ize ndụ ka ọ ga -enweta mmeri nke mmadụ niile. Ya mere, o mere.
Mana mgbe oge ruru ịmanye onwe ya n'ike dị ka ihe karịrị consort, onyinyo ọrịa ahụ na -ekokwasị ya na mkpali dị nso n'oge ọrịa cancer anyị.
Agbanyeghị, ihe kacha njọ maka Julia bụ ịchọta ụmụ ya nwoke Caracalla na Geta na -enwebeghị ike na -enwebeghị ikike ya. Kedu ihe na -eme ka ọ nweta ume site na adịghị ike iji nwaa ịkwụsị ọgụ na -enweghị isi nke nwere ike tufuo mbọ na nraranye ya niile n'ala.
Ebe ọrịa cancer ara na -agbasasịkwa n'ahụ ya, Julia na -enwe mmetụta mgbe ụfọdụ oke mmeri maka ndụ ya na maka ọdịnihu n'azụ ya. Mana ..., akara aka ma ọ bụ ohere nke chi, naanị mkpali ọhụrụ siri ike dịka nke ịhụnanya nwere ike weghachite ya maka mmụọ ya kacha nwee mmụọ.
Ịhụnanya dị ka lever nke ọ ga -eji maliteghachi nnukwu mbọ ikpeazụ ọ nyere alaeze ukwu ahụ, tupu chi ọbụbọ nke ụbọchị ya ewere ya ebe ọ bụla ọ ga -erute; karịa nkwado nke chi ụfọdụ nke ọ dị ka ọ chọghị ịkpa nkata maka ndụ ikpeazụ ya.
Agba nke asaa nke hel
M na -agbagha ọrụ a dị iche n'etiti akwụkwọ akụkọ Julia mere saga echefu echefu. Mana ọ bụghị ihe nzuzu kama ọ bụ ịnụ ụtọ ọrụ na -atọ ụtọ.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na mkpụrụ obi ndị na -emekpa nri na -enye ihe okike n'ozuzu ya na ihe odide ederede karịsịa. Ekwetaghị m na ọ dị onye okike ọ bụla nke na -enyochabeghị n'ime omimi nke ịla n'iyi, obi nkoropụ, obi mgbawa, nchefu ma ọ bụ mwute iji wedata nnukwu ọrụ nke akwụkwọ ụwa niile.
Ewezuga aha ọgbọ, ndị otu a na -eme ka a na -eme ma ọ bụ na -eme ka ha dị, ngosipụta nke ndị ọrụ gọọmentị, ọchịchọ nke akụkọ ihe mere eme (nke bara uru ikwu okwu), yana ihe ọ bụla omume mmadụ na -emekarị na -esetịpụ, ihe okike nwere akara. Ihe okike kachasị mma enweghị ike ịdị na -enweghị oke ibu nke mkpụrụ obi okike nke garala hel.
N'ime akwụkwọ a nke na -ewetara anyị ọtụtụ ndị edemede akụkọ ihe mere eme nke ọnọdụ ha tara ahụhụ, Santiago Posteguillo na -ebi na Dante hell dị ka ihe atụ nke okike edemede. Dante dị ka onye edemede ihe atụ zuru ụwa ọnụ na ihe nkiri ya nke Chukwu. Na ihe ịga nke ọma na ntụnyere bụ kachasị.
Hell labyrinthine na -enye ihe dị ukwuu iji nabata ndị ọbịa ebighi ebi ma ọ bụ ndị njem oge ụfọdụ, anyị niile nwere ike ịga ije ebe ahụ ala mmụọ mepere oghere ya. Hell ọtụtụ puku kpagburu ndị ode akwụkwọ na ndị ode akụkọ ihe mere eme, dị ka nkọwa nkọwa nke akwụkwọ n'onwe ya na -ekwupụta, site na KGB ruo Ọchịchị Nazi, site na agha ọ bụla ruo mfu ọ bụla, site na nyocha na mmetụta enweghị mmetụta nke ọpụpụ. Hel bụ steeti, kpalitere ma ọ bụ kpalie onwe ya.
Mana mgbe akwụkwọ na -aghọ ụdị ọgwụgwọ, placebo, oghere maka mmebi nke ikpe ọmụma ma ọ bụ ebe nzukọ na mkpụrụ obi ndị ọzọ, a na -eme ka hel bụrụ ihe ziri ezi na obere ntaramahụhụ ahụ.
Ntụle dị egwu nke akwụkwọ ụwa na -enweghị aha ma ọ bụ echiche gọọmentị, ịbịaru ọtụtụ ndị edemede nwere mmetụta ma dee, ndị tụbara hel na mmụọ ọjọọ ha n'akwụkwọ, nwere olile anya karịa ma ọ bụ obere, na -enwe ebumnuche ma ọ bụ obere ime ka anwụghị anwụ nke mkpụrụ obi.
Akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ akwadoro nke Santiago Posteguillo…
Akwụkwọ akụkọ nke na -agbake ọzọ amamịghe akụkọ ihe mere eme gọnarịrị nwanyị ma bụrụkwa eziokwu dịka egosiri ya site na ihe akaebe.
N'agbata agha maka ike ọchịchị alaeze Rome nke narị afọ iri, ọgụgụ isi Julia na -enyere aka idu oge akụkọ ihe mere eme nke nwere ike mechaa bụrụ ihe dị mkpa maka ọchịchị nke ụwa ama ama mana na enweghị ntụkwasị obi ya gosipụtara ya, Julia, ka ọ bụrụ chi nwanyị. aghụghọ nke Alaeze Ukwu.
Ma ọ bụ na, ọdịnihu ikpeazụ nke ọ nọ na -achọ, bụ otu nke mechara zụlite ya dị ka eze nwanyị kachasị ike, onye isi nke usoro ndị eze jikọtara ọnụ site n'ịgbagharị ụgbọ ala ya na nnukwu atụmatụ atụmatụ ya na nsọtụ ọdachi. .
Nwanyị eze nwanyị a na -akwanyere ùgwù bịara ị nweta isi ihe dị na steeti ahụ, pụtara na mkpụrụ ego etinyere ma mara ka ọ ga -esi bụrụ nnukwu nwanyị mbụ ga -achị ụwa site na mbọ abụọ a nke nwanyị ọ bụla kwesịrị ime maka azụmahịa ọ bụla.
Ọbara nke akwụkwọ
Ime anwansi nke akwụkwọ na -agwa ihe mere n'oge akụkọ ọ bụla. Mmasị nke ibe jupụtara ink na ọbara.
Akwụkwọ bụ ihe akaebe kacha mma nke mmepeanya anyị site na mgbe ide ihe ghọrọ ụzọ bụ isi nke akụkọ ntolite anyị. Akwụkwọ ndị bụ isi na ndakọ ha ruru ụbọchị anyị. Akwụkwọ ndị na -agwaghị ihe niile na ndị ọzọ kwuru oke.
Onye edemede ahụ niile ma ọ bụ ode akwụkwọ nke oge ndị ọzọ nwetara nnukwu ọrụ nke ịgwa anyị ihe mere ndị nna nna anyị, ụwa anyị ka emechara.
Posteguillo na -eduga anyị n'akụkọ ihe mere eme site n'ọtụtụ akwụkwọ na -ekwu maka ndụ pụrụ iche, mkpebi dị oke mkpa na ụfọdụ ihe omimi gbadara anyị taa dịka edere na karama ...
N'abalị Frankstein gụrụ Don Quixote
N'okpuru aha a na -atụ aro anyị na -ahụ ụfọdụ akụkọ na -ejikọ anwansi nke ohere akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ ohere nke jikọtara usoro akụkọ ihe mere eme site n'akwụkwọ.
Ụdị akụkọ ihe mere eme yiri ibe ya na -enye nkọwa ndị ọzọ nke ihe ndị dị mkpa na akụkọ ntolite, site na ezigbo nke ihe Shakespeare dere n'akwụkwọ ndị na -akwa ụka na -enweghị isi nke ụka na nke ahụ nwere ike imeghe uche isi ike na eziokwu gbara ọchịchịrị nke ụka gosipụtara.
Tags Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, Santiago Posteguillo